Nru ububa urukurubụba: ihe ọ bụ, njirimara na usoro ọgbaghara | Netwọk Mgbasa Ozi
N'ezie ị nụtụrụla ma ọ bụ hụ ihe nkiri nke urukurubụba mmetụta. Mmetụta a sitere na ilu ndị China na-ekwu ihe ndị a: "enwere ike ịnụ nku nku urukurubụba n'akụkụ nke ọzọ nke ụwa." Nke a pụtara na ọbụlagodi obere nkọwa nwere ike ibute nsonaazụ ndị ọzọ dị iche. Ihe ọ bụla anyị mere nwere ike inwe mmetụta ogologo oge dị ogologo oge. Enwere ike ịkọwapụta ya ma ọkwa nke okike na ọkwa nke omume mmadụ na omume onwe anyị.
N'isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe nru ububa dị na ya na ihe bụ isi njirimara ya.
1 Gịnị bụ urukurubụba utịp
2 Mpaghara nke nru ububa
3 Ọdịdị ọgbaghara
Gịnị bụ urukurubụba utịp
Nru ububa urukurubụba jikọtara ya na usoro ọgbaghara. Ozizi a na-ekwu na ịkpụgharị ahụhụ na Hong Kong nwere ike ime ka oké ifufe na New York pụta. Ọ bụ usoro na-enweghị mkpebi nwere obere mgbanwe nke nwere ike ibute nsonaazụ dị iche. Na mbido, ọ na-amalite site na obere ọgba aghara. Site na usoro mmebawanye ụda, obere ọgba aghara a nwere ike iwepụta mmetụta dị ukwuu na ọkara na obere oge.
Mgbanwe nke kpakpando na aghara, mmeghari nke plankton n’osimiri, igbu oge nke ugbo elu, imeko ihe nke akwara ozi, dgz. Usoro ndị a niile dị egwu ma ọ bụ ike na-enweghị usoro nwere ike ịkpalite ụfọdụ mmetụta dị iche na obere ma ọ bụ ọkara oge. Ozizi ọgbaghara na nsị nru ububa na-akọwa na ihe dị mgbagwoju anya dịka ụwa niile bụ ihe a na-apụghị ịkọwa akọwa. Eluigwe na ụwa bụ usoro ọgbaghara na-agbanwe agbanwe. Chaos tiori na akowa otu ikuku site na onodu nke Ihuigwe na-egbochi amụma mgbe ihu igwe a pụrụ ịtụkwasị obi gafere ụbọchị atọ.
A na-eji mmetụta nru ububa eme ihe iji lebara ọmụmụ ihe anya na mmekọrịta mmadụ na ibe ya nke siri ike idozi n'ihe gbasara usoro na mmetụta mmekọrịta. Enwere ike ịsị na obere ihe nwere ike inwe mmetụta dị ukwuu na oge. Ọ bụrụ na anyị ewere ya na nke onwe anyị, anyị nwere ike ịhụ na itinye ọtụtụ omume na ndụ anyị nwere ike ịkpalite nsonaazụ ndị ọzọ.
Mpaghara nke nru ububa
Enwere ike itinye mmetụta urukurubụba n'ọtụtụ ebe. Ọ nwere ike ịbụ isi ihe ndabere na ọrụ edemede dị iche iche ma ọ bụ bụrụ akụkụ nke echiche dị mkpa na usoro esemokwu na sayensị ndị ọzọ na-ewu ewu dị ka nkwupụta ọgbaghara. Ma ọ bụ na nru ububa ahụ na-emetụta ihe nnọchianya nke a pụrụ itinye n'ọrụ dị iche iche.
Nyere na otu omume ma ọ bụ ọnọdụ nwere ike iduga n'usoro nke ọnọdụ ma ọ bụ omume ndị na-esote nke na-eme ka ọ nwee mmetụta dị ukwuu na ọ dị ka ọ naghị adaba n'ọnọdụ nke ihe mejupụtara ya. Nyere na ọ bụrụ naanị na-enyocha ihe kpatara ya na nsonaazụ ikpeazụ, ọ nwere ike ọ gaghị enwe nnukwu mmekọrịta n'etiti ha. Agbanyeghị, obere ọrụ izizi bụ nke malitere ịkpalite mmetụta ndị ọzọ pere mpe mana nke ahụ enweela mmụba oge. Nke a bụ mmetụta dị na utịp eruola nsonaazụ ikpeazụ.
Echiche nke urukurubụba mmetụta malitere site na ahụmahụ nke ọkà mmụta ihu igwe Edward Lorenz. Onye a na-amụ gbasara ihu igwe bụ mkpụrụ ndụ urukurubụba na 1973 n'ihi enweghị ike inwe ike ịkọwa amụma ihu igwe ogologo oge zuru oke. Nke a bụ n'ihi n'eziokwu na omume nke mgbanwe dị iche iche nwere ike imezi omume ikuku na-agbakọta na ihu igwe.
Mgbe anyị na-ekwu maka usoro ikuku na mmiri ozuzo, a ga-enyocha ọtụtụ ndị na-agbanwe agbanwe. Mgbanwe ndị nwere uru nke na-adabere na ndị ọzọ na-agbanwe agbanwe na ajụjụ. Dịka ọmụmaatụ, ọnọdụ okpomọkụ dị na mpaghara ga-adabere na nchepụta nke ụzarị anyanwụ na-esite na mbara igwe. Nke a, n’aka nke ya, dabere na oge a na-eme na ntụgharị asụsụ ụwa anyị a gbasara mbara igwe. Yabụ, okpomọkụ abụghị naanị dabere n'ihe anyị kwurula kama na mgbanwe ndị ọzọ dị ka ihe ikuku, ọnụọgụ gas dị na mbara igwe, iru mmiri, wdg.
Ebe ọ bụ na mgbanwe nke ọ bụla na-adabere na ya ma ọ bụ na-adabere na mgbanwe ndị ọzọ, a na-etolite ụdị ọgba aghara nke siri ike ịkọ mgbe oge ụfọdụ gasịrị.
Ihe a niile na-akọwara anyị na ọgbaghara ọgbaghara dị na nsị nru ububa. Nke a na-egosi anyị na ngbanwe ndị ahụ nwere ike ịdị nfe nke enweghị mgbanwe nke ihe na-agbanwe agbanwe, nwere ike iwepụta oke mmetụta. Mgbanwe mbu ma ọ bụ ihe mbụ bụ nke ahụ Ọ na - ebute usoro nke na - eme ka ndị ọzọ na - agbanwe agbanwe gbasaa mmetụta ruo mgbe a ga - enweta nsonaazụ ikpeazụ. Usoro a na-enwetawanye ike.
Nke a bụ ọgba aghara a bụ mbido okwu a na-ewu ewu na ịmịpụta urukurubụba na Hong Kong nwere ike ibute ajọ ifufe na New York. Nke a pụtara na ntakịrị mgbanwe n'otu usoro ahụ nwere ike iduga na dị iche iche na ọbụlagodi nsonaazụ a na-atụghị anya ya. A na-ahụkarị mmetụta nru ububa dị ka ihe atụ ma ọ bụ ihe atụ nke eji mee ihe dị ka otu n'ime ogidi nke ọgba aghara. Ọ bụ Edward Lorenz malitekwara ụkpụrụ ọgbaghara. Dabere na ọkà mmụta ihu igwe a na mbara igwe, e nwere sistemụ na-emetụta oke ọnụnọ nke ọdịiche. Mgbanwe ndị a niile nwere ike iweta nsonaazụ dị iche iche dị oke mma, mana enwere mmachi, n'ụzọ ọgbaghara na enweghị atụ.
Modelkpụrụ kachasị nke nkwupụta ọgba aghara na-atụ aro na na ihu abụọ ụwa ma ọ bụ ọnọdụ ndị nwere naanị otu na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na-enweghị isi na-agbanwe ya na ibe ya, oge na ọganihu, esemokwu ndị ọzọ nwere ike ibilite nke ga-akpata ụwa dị iche na ibe ya. Nke ahụ bụ, anyị ga-etinye ihe atụ dị mfe. Anyị na-etinye ụwa abụọ na ụwa niile otu ọnọdụ ebe ọ bụ na e kere ya, mana nke anyị na-etinye ntakịrị karịa nkezi okpomọkụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ obere mgbanwe, eziokwu ahụ bụ na otu mbara ala nwere ogo ole na ole karịa ogo okpomọkụ nke ọzọ nwere ike ịkọwa na, n'ime ọtụtụ puku afọ, ndụ ga-etolite n'ụzọ ọzọ.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nru ububa nke njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Ihe nru ububa ahụ na-emetụta